बुल र बियर मार्केटका प्रमुख विशेषताहरु के–के हुन् ?
काठमाडौं : सेयर बजारमा लगानी गर्ने हरेकले सुन्दै आएको शब्द हो ‘बुल’ र ‘बियर’ । सेयर बजारको निश्चित अवस्थालाई जनाउन यी दुई शब्दको प्रयोग हुने गर्दछ । अर्थात, सेयर बजार बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा छ भन्ने जनाउन यी शब्दहरुको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ । बुल र बियरले सेयर बजारको दिशालाई संकेत गर्दछन् । लगानीकर्ताका लागि बजारले लिने दिशा नै पोर्टफोलियोमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमुख कारण हुन् । तसर्थ, बजारको यी दुवै अवस्थाले आफ्ना लगानीमा कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने जान्नु लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन जान्छ ।
बुल vs बियर मार्केट
सेयर बजार बढ्दो क्रममा छ र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि बजारका लागि अनुकूल छ भने त्यस्तो अवस्थालाई ‘बुल मार्केट’ भनिन्छ । वा, लामो समयसम्म बजार माथिल्लो गतिमा लाग्ने वा माथिल्लो विन्दुतिर लम्किएरहेको अवस्थालाई बुल मार्केट भनिन्छ । त्यसको ठीक विपरीत, सेयरको भाउ घट्दो क्रममा छ र अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थालाई बियर मार्केट भनिन्छ ।
सामान्यतयः विश्वव्यापी मान्यता अनुसार लामो समयसम्म बजार भाउमा २०% वा सो भन्दा बढीले आउने स्थिर गिरावटको अवस्थालाई बियरिस मार्केटका रुपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय बजार धेरै हदसम्म लगानीकर्ताको मनोविज्ञानबाट प्रभावित हुने भएकाले ‘बुल’ र ‘बियर’ शब्दले सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ताको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने विषयको पनि संकेत गर्छ । बुल मार्केटमा सेयरको भाउ निरन्तर वृद्धि भइरहेको हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मानसिकता पनि बजार लामो समयका लागि माथि जान्छ भन्ने रहन्छ । मजबुत अर्थतन्त्र र उच्च रोजगारीदरले बजारको बुलिस यात्रालाई साथ दिएका हुन्छन् । अर्कोतर्फ, घट्दोक्रममा रहेको बजारलाई ‘बियर मार्केट’ भनिन्छ । सामान्यतयः उच्च विन्दुबाट २०% वा सो भन्दा बढी अंकले नघट्दासम्म बजारलाई बियरिस मानिँदैन ।
त्यसलाई करेक्सनका रुपमा मात्र लिइन्छ । बियर मार्केटमा सेयरहरुको भाउ निरन्तर घटिरहेको हुन्छ । जसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बनाउँछ । बजारमा एकपछि अर्को गिरावट आउन सुरु हुन्छ । सामान्यतयः अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जानु र बरोजगारीदरमा उच्च वृद्धि हुनुलाई बियर मार्केटको प्रमुख कारणका रुपमा लिने गरिएको छ ।
बुल र बियर मार्केटका विशेषता
बुल मार्केट र बियर मार्केट दुवै सेयर भाउद्वारा निर्देशित हुने भए पनि दुवैको आ–आफ्नै विशेषताहरु छन् । जसका बारेमा लगानीकर्ता सचेत हुन आवश्यक छ ।
–सेयरको माग र आपूर्ति : बुल मार्केटमा सेयरका लागि माग उच्च हुन्छ भने आपूर्ति न्यून हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा, अधिकांश लगानीकर्ता सेयर खरिद गर्ने दाउमा हुन्छन् । तर बिक्री गर्नेको संख्या निकै थोरै हुने गर्दछ । माग बढी हुने भएकाले सेयर भाउ बढ्छ । यसको विपरीत, बियर मार्केटमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक हुन्छ तर मागमा गिरावट आउँछ । बजारमा खरिदकर्ताको संख्या भन्दा बिक्रीकर्ताको संख्या बढी हुँदा सेयर भाउ घट्छ । माग र आपूर्तिलाई अर्थतन्त्रको साधारण नियमका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
अधिकांश समय सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुको मनोविज्ञान नै बजार घट्ने वा बढ्ने कारण बन्ने गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले बजारप्रति कस्तो धारण बनाएका छन् सोही अनुरुप बजारले पनि प्रतिकृया देखाउने गर्छ । तसर्थ, सेयर बजारको प्रदर्शन लगानकर्ताको मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको छ । बुल मार्केटमा लगानीकर्ता निकै आशावादी हुन्छन् । उनीहरुले समग्र बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ ।
सर्ट सेलिङ गर्ने बाहेक सेयरको भाउ बढ्दा खुशी नहुने लगानीकर्ता सायदै भेटिएलान् । लगानीकर्ताको सकारात्मक उर्जाको प्रभाव बजारमा प्रत्यक्ष देखिने गर्दछ । बुलिस बजारमा नाफा कमाउने आशाले नयाँ नयाँ ।लगानीकर्ताहरु पनि बजार प्रवेश गर्दछन् । जसले बजारलाई उचाई दिन मद्दत गर्दछ । यता, बियरिस बजारमा भने ठीक उल्टो हुने गर्दछ ।
लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बन्दछ । समग्र बजारलाई हेर्ने दृष्टीकोण नकारात्मक बन्दा बजार झन् झन् तल झर्छ । नाफामा सेयर बेचेकाले पुनः बजारमै पैसा लगाउन हिच्किचाउँछन् भने नयाँ लगानीकर्ता पनि बजार प्रवेश गर्न रुचाउँदैनन् । विस्तारै सेयर बजारबाट पैसा बाहिरिने र फिस्स्ड आम्दानी दिने अन्य लगानीका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था र सेयर बजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । अर्थतन्त्र मजबुत बन्दा सेयर बजार पनि सुधार हुन्छ भने अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सेयर बजार पनि कमजोर बन्छ । कमजोर अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ भने व्यवसायहरुको नाफा गर्ने क्षमतामा पनि कमि आउन सक्छ ।
जसले बियरिस बजारको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक गतिविधि चलायमान र मजबुत हुँदा मानिसहरुको खर्च गर्ने क्षमता मजबुत हुन्छ । कम्पनीहरुको नाफामा पनि सुधार हुन्छ । यसले पुँजी बजारमा लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सम्भावना हुन्छ । र, बुलिस बजारको संकेत गर्दछ ।
बुल र बियर मार्केटको मापन कसरी गर्ने ?
बजार बुलिस हो कि बियरिस भनेर थाहा पाउन बजारले दीर्घकालमा कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने हेर्न अति आवश्यक हुन्छ । कुनै निश्चित घटनालाई लिएर बजारले दिएको प्रतिकृया अल्पकालीन हुन्छ, जसबाट बजारको दिशा थाहा हुन सक्दैन । कतिपय अवस्थामा बजारमा सामान्य करेक्सन मात्र देखिएको पनि हुन सक्छ । बजार लामो समयसम्म साइडवेज भएर बस्न पनि सक्छ । तसर्थ, लामो समयसम्म बजारले कस्तो गति लिइरहेको छ सोही आधारमा मात्र बजार बुलिस हो कि बियरिस भन्न सकिन्छ ।
लगानकर्ताले अर्थतन्त्रको अवस्था, डिमान्ड र सप्लाई लगायत अन्य आधारलाई पनि गहन रुपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । साथै, तरलता र ब्याजदरको अवस्था पनि अर्थतन्त्रको अवस्थाले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले पनि बजार प्रभावित भएको हुन सक्छ । यद्दपि, ठीक यो समयमा यो अवधिका लागि बुल अथवा बियर हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन । बुल र बियर मार्केटका विशेषतालाई ख्याल गरी अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।
बुल र बियर मार्केटमा के गर्ने ?
सम्भव भएसम्म बुल मार्केटमा ट्रेन्डको पहिचान गरी सुरुवाती चरणमै लगानी गर्नुपर्दछ । बुल मार्केटको सुरुवातमै लगानी गर्नसक्दा बढ्दो मूल्यको राम्रो फाइदा उठाउन सकिन्छ । बुल मार्केटमा नोक्सान हुने सम्भावना झिनो मात्रामा र भइहाले पनि त्यो छोटो समयका लागि मात्र रहन्छ । तसर्थ, बुल मार्केटमा राम्रो सम्भावना बोकेका सेयरहरुमा दृढ विश्वासका साथ लगानी गर्न सकिन्छ ।
यता, भाउ निरन्तर घट्दोक्रममा हुने भएकाले बियर मार्केटमा नोक्सान हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजारको उतारचढावले खासै धेरै असर नगर्ने डिभिडेन्ड ओरियन्टेड तथा भ्याल्यू स्टकमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै, बजारको गिरावट रोकिने अवस्था टाढा देखियो भने फिक्स्ड आम्दानी दिने लगानीका अन्य सुरक्षित उपकरणमा पनि हात हाल्न सकिन्छ ।